Adventure – Categories – Alpha Premium
Vikings: Valhalla (2022) ##unicode Vikings : Valhalla ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲလေးဟာဆိုရင်သမိုင်းမှတ်တမ်းတင်ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွဲမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ ၂၀၁၃ ခုနှစ်ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့" Vikings" ဆိုတဲ့ကားရဲ့အဆက်ဖြစ်ပါတယ် ဒီဇာတ်လမ်းတွဲကိုတော့ အစောပိုင်း ၁၁ ရာစုလောက်မှာဇာတ်အိမ်တည်ထားပြီးတော့ နာမည်ကြီးဗိုက်ကင်းခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ လိတ်ဖ်အယ်ရစ်ဆန် ဖရယ်ဒစ်အယ်ရစ်ဒေါ့တာ ဟာရယ်ဟာဒရာဒါအစရှိတဲ့ဂန္တဝင်နာမည်ကြီးသူရဲကောင်းကြီးတွေရဲ့ တိုက်ပွဲတွေနဲ့ စွန့်စားခန်းအကြောင်းတွေကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကြောင်းအရာလေးကတော့ ၁၁ ရာစုအစောပိုင်းကာလကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာ ဗိုက်ကင်းတွေနဲ့အင်္ဂလိပ်တော်ဝင်မျိုးနွယ်တွေကြားကပဋိပက္ခတွေဟာတဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာခဲ့ပါတယ် ဒီလိုနဲ့ဗိုက်ကင်းခေါင်းဆောင်တွေဟာသမုဒ္ဒရာကိုဖြတ်ပြီး အင်္ဂလန်အထိချီတက်သိမ်းပိုက်ဖို့တိုက်ပွဲဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ် သူတို့တွေအင်္ဂလန်ကိုသိမ်းပိုက်ပြီးတော့ဗိုက်ကင်းတွေရဲ့အောင်မြင်မှုသမိုင်းကြောင်းကိုရေးထိုးနိုင်ခဲ့လားဆိုတာကိုတော့ ဇာတ်လမ်းထဲမှာဆက်လက်ကြည့်ရှုပေးကြပါဦးနော် ဒီကားထဲမှာဆိုရင်ဗိုက်ကင်းလူမျိုးတွေရဲ့သမိုင်းကြောင်းအပြည့်အစုံနဲ့ သူတို့ရဲ့တိုက်ပွဲကြီးတွေအကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကြည့်ရှုရမှာဖြစ်လို့ လက်မလွှတ်တမ်းကြည့်ရှုသင့်တဲ့ဇာတ်ကားကောင်းလေးဖြစ်ပါတယ် ##zawgyi Vikings : Valhalla ဆိုတဲ့ဇာတ္လမ္းတြဲေလးဟာဆိုရင္သမိုင္းမွတ္တမ္းတင္႐ုပ္ရွင္ဇာတ္လမ္းတြဲမ်ိဳးျဖစ္ၿပီးေတာ့ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ကထြက္ရွိခဲ့တဲ့" Vikings" ဆိုတဲ့ကားရဲ႕အဆက္ျဖစ္ပါတယ္ ဒီဇာတ္လမ္းတြဲကိုေတာ့ အေစာပိုင္း ၁၁ ရာစုေလာက္မွာဇာတ္အိမ္တည္ထားၿပီးေတာ့ နာမည္ႀကီးဗိုက္ကင္းေခါင္းေဆာင္ေတြျဖစ္တဲ့ လိတ္ဖ္အယ္ရစ္ဆန္ ဖရယ္ဒစ္အယ္ရစ္ေဒါ့တာ ဟာရယ္ဟာဒရာဒါအစရွိတဲ့ဂႏၲဝင္နာမည္ႀကီးသူရဲေကာင္းႀကီးေတြရဲ႕ တိုက္ပြဲေတြနဲ႔ စြန႔္စားခန္းအေၾကာင္းေတြကို႐ိုက္ကူးတင္ဆက္ထားတာျဖစ္ပါတယ္ ဇာတ္လမ္းအေၾကာင္းအရာေလးကေတာ့ ၁၁ ရာစုအေစာပိုင္းကာလကိုေရာက္လာတဲ့အခ်ိန္မွာ ဗိုက္ကင္းေတြနဲ႔အဂၤလိပ္ေတာ္ဝင္မ်ိဳးႏြယ္ေတြၾကားကပဋိပကၡေတြဟာတျဖည္းျဖည္းႀကီးထြားလာခဲ့ပါတယ္ ဒီလိုနဲ႔ဗိုက္ကင္းေခါင္းေဆာင္ေတြဟာသမုဒၵရာကိုျဖတ္ၿပီး အဂၤလန္အထိခ်ီတက္သိမ္းပိုက္ဖို႔တိုက္ပြဲဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကပါတယ္ သူတို႔ေတြအဂၤလန္ကိုသိမ္းပိုက္ၿပီးေတာ့ဗိုက္ကင္းေတြရဲ႕ေအာင္ျမင္မႈသမိုင္းေၾကာင္းကိုေရးထိုးႏိုင္ခဲ့လားဆိုတာကိုေတာ့ ဇာတ္လမ္းထဲမွာဆက္လက္ၾကည့္ရႈေပးၾကပါဦးေနာ္ ဒီကားထဲမွာဆိုရင္ဗိုက္ကင္းလူမ်ိဳးေတြရဲ႕သမိုင္းေၾကာင္းအျပည့္အစုံနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕တိုက္ပြဲႀကီးေတြအေၾကာင္းကိုစိတ္ဝင္စားဖြယ္ၾကည့္ရႈရမွာျဖစ္လို႔ လက္မလႊတ္တမ္းၾကည့္ရႈသင့္တဲ့ဇာတ္ကားေကာင္းေလးျဖစ္ပါတယ္ Review – Phyu Sin File Size – 800MB (per episodes) Format…mp4 Quality : 1080p WED-DL Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Phyu Sin & Hmue Encoded by ...
TMDb: 8.6/10 23 votes
Blade Runner: Black Lotus (2021) (App only) (free ကြည့်ချင်တဲ့သူတွေလဲ app ကနေကြည့်လို့ရပါတယ်) ##unicode Blade Runner: Black Lotus ဆိုတဲ့ Japanese-American anime series အသစ်လေးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် အက်ရှင် Thriller ပုံစံမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဇာတ်လမ်းက တကယ်မိုက်ပြီးတကယ်ကြမ်းပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကြောင်းအရာလေးကတော့အယ်လ်ဆိုတဲ့မိန်းကလေးဟာ တစ်ရက်သူနိုးလာတဲ့အချိန်မှာမှတ်ဉာဏ်တွေအားလုံးပျောက်နေခဲ့ပါတယ် စစချင်းသူ့နာမည်တောင်မမှတ်မိခဲ့ပါဘူး သူ့မှာရှိတဲ့တစ်ခုတည်းသောသဲလွန်စကတော့ပိတ်ထားတဲ့ဒေတာစက်တစ်ခုနဲ့ သူ့ရဲ့ခန္တာကိုယ်ပေါ်ကအမည်းရောင်ရှိတဲ့ ကြာပန်းတက်တူးပုံပါပဲ ဒီလိုနဲ့အယ်လ်ဟာသူ့ရဲ့ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့မှတ်ဉာဏ်နဲ့အတိတ်ကိုရှာဖွေဖို့ကြိုးစားပါတော့တယ် အယ်လ်ရဲ့အတိတ်မှာဘာတွေဖြစ်ခဲ့တာလဲသူကြိုးစားရှာဖွေနေတဲ့မှတ်ဉာဏ်တွေထဲမှာ ဘယ်လိုလျှို့ဝှက်ချက်တွေရှိနေတာလဲဆိုတာကိုတစ်ပိုင်းချင်းဖော်ထုတ်သွားမယ့်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းဖို့ကောင်းတဲ့ ကားလေးဖြစ်လို့ ကြည့်ရှုလိုက်ကြပါဦးနော် ##zawgyi Blade Runner: Black Lotus ဆိုတဲ့ Japanese-American anime series အသစ္ေလးကိုတင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္ အက္ရွင္ Thriller ပုံစံမ်ိဳးျဖစ္ၿပီးေတာ့ဇာတ္လမ္းက တကယ္မိုက္ၿပီးတကယ္ၾကမ္းပါတယ္ ဇာတ္လမ္းအေၾကာင္းအရာေလးကေတာ့အယ္လ္ဆိုတဲ့မိန္းကေလးဟာ တစ္ရက္သူႏိုးလာတဲ့အခ်ိန္မွာမွတ္ဉာဏ္ေတြအားလုံးေပ်ာက္ေနခဲ့ပါတယ္ စစခ်င္းသူ႔နာမည္ေတာင္မမွတ္မိခဲ့ပါဘူး သူ႔မွာရွိတဲ့တစ္ခုတည္းေသာသဲလြန္စကေတာ့ပိတ္ထားတဲ့ေဒတာစက္တစ္ခုနဲ႔ သူ႔ရဲ႕ခႏၲာကိုယ္ေပၚကအမည္းေရာင္ရွိတဲ့ ၾကာပန္းတက္တူးပုံပါပဲ ဒီလိုနဲ႔အယ္လ္ဟာသူ႔ရဲ႕ေပ်ာက္ဆုံးသြားတဲ့မွတ္ဉာဏ္နဲ႔အတိတ္ကိုရွာေဖြဖို႔ႀကိဳးစားပါေတာ့တယ္ အယ္လ္ရဲ႕အတိတ္မွာဘာေတြျဖစ္ခဲ့တာလဲသူႀကိဳးစားရွာေဖြေနတဲ့မွတ္ဉာဏ္ေတြထဲမွာ ဘယ္လိုလွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ေတြရွိေနတာလဲဆိုတာကိုတစ္ပိုင္းခ်င္းေဖာ္ထုတ္သြားမယ့္စိတ္ဝင္စားဖို႔ေကာင္းဖို႔ေကာင္းတဲ့ ကားေလးျဖစ္လို႔ ၾကည့္ရႈလိုက္ၾကပါဦးေနာ္ Review – Phyu Sin File Size – 400MB (per episode) Format…mp4 Quality : 1080p WED-DL Genre : Action,Aventure,Sci-fi Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Phyu Sin Encoded by Arrow ==================================================================== App ဒေါင်းရန္ App Link မန်ဘာဝင်လိုသူများ viber ...
Maya and the Three Season 1 Complete (App only) (free ကြည့်ချင်တဲ့သူတွေလဲ app ကနေဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်) ##unicode ဒီကာတွန်းဇာတ်လမ်းတွဲကတော့ Netflixကအသစ်ထွက်ရှိထားပြီး ratingကလည်း 8/10ရရှိထားတာဖြစ်လို့ လက်မလွှတ်တမ်းကြည့်ရူသင့်တဲ့ ကားတွန်းစီးရီးတစ်ခုပါ တော်ဝင်မင်းသမီးလေး မာရာဟာ သူ့အမေဖြစ်စေချင်တဲ့အတိုင်း နန်းတော်ထဲမှာပဲနေတဲ့သံတမန်မဖြစ်ချင်ဘဲ စွန့်စားခန်းတွေနဲ့စစ်သည်တော်တစ်ယောက်ဖြစ်ချင်ခဲ့တာပါ အဲဒီနောက် အမှောင်လောကသားနတ်ဘုရားတွေ သူတို့ဆီကိုရောက်ရှိလာပြီး လူသားမျိုးနွယ်ကိုဖျက်စီးကြမယ်ဆိုတဲ့ ရှေ့ဖြစ်ဟောကိန်းဟာ မာရာနဲ့သက်ဆိုင်လာခဲ့ပါတယ် မာရာရဲ့နန်းတတ်ပွဲရှေ့မှာ အမှောင်လောကရဲ့သံတမန်ရောက်ရှိလာပြီး မာရာကို ယစ်ပူဇော်ဖို့အတွက်လာခေါ်ခဲ့ပါတယ် မာရာကိုထည့်မပေးလိုက်နိုင်တဲ့ သူတို့တိုင်းပြည်ဟာ အမှောင်လောကကိုစစ်ကြေငြာသလိုဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ် ရှေ့ဖြစ်ဟောကိန်းအရ သူတို့ကိုအနိုင်ယူနိုင်ဖို့ စစ်သည်တော်သုံးယောက်ကို မာရာလိုက်ရှာရမှာပါ အမြဲတမ်းစွန့်စားခန်းဖွင့်ချင်ခဲ့တဲ့ မာရာတစ်ယောက် ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာ ဒီဇာတ်လမ်းတွဲမှာမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်လို့ ကြည့်ရူအားပေးကြပါဦးနော် ##zawgyi ဒီကာတြန္းဇာတ္လမ္းတြဲကေတာ့ Netflixကအသစ္ထြက္ရွိထားၿပီး ratingကလည္း 8/10ရရွိထားတာျဖစ္လို႔ လက္မလႊတ္တမ္းၾကည့္႐ူသင့္တဲ့ ကားတြန္းစီးရီးတစ္ခုပါ ေတာ္ဝင္မင္းသမီးေလး မာရာဟာ သူ႔အေမျဖစ္ေစခ်င္တဲ့အတိုင္း နန္းေတာ္ထဲမွာပဲေနတဲ့သံတမန္မျဖစ္ခ်င္ဘဲ စြန႔္စားခန္းေတြနဲ႔စစ္သည္ေတာ္တစ္ေယာက္ျဖစ္ခ်င္ခဲ့တာပါ အဲဒီေနာက္ အေမွာင္ေလာကသားနတ္ဘုရားေတြ သူတို႔ဆီကိုေရာက္ရွိလာၿပီး လူသားမ်ိဳးႏြယ္ကိုဖ်က္စီးၾကမယ္ဆိုတဲ့ ေရွ႕ျဖစ္ေဟာကိန္းဟာ မာရာနဲ႔သက္ဆိုင္လာခဲ့ပါတယ္ မာရာရဲ႕နန္းတတ္ပြဲေရွ႕မွာ အေမွာင္ေလာကရဲ႕သံတမန္ေရာက္ရွိလာၿပီး မာရာကို ယစ္ပူေဇာ္ဖို႔အတြက္လာေခၚခဲ့ပါတယ္ မာရာကိုထည့္မေပးလိုက္ႏိုင္တဲ့ သူတို႔တိုင္းျပည္ဟာ အေမွာင္ေလာကကိုစစ္ေၾကျငာသလိုျဖစ္သြားခဲ့ပါတယ္ ေရွ႕ျဖစ္ေဟာကိန္းအရ သူတို႔ကိုအႏိုင္ယူႏိုင္ဖို႔ စစ္သည္ေတာ္သုံးေယာက္ကို မာရာလိုက္ရွာရမွာပါ အၿမဲတမ္းစြန႔္စားခန္းဖြင့္ခ်င္ခဲ့တဲ့ မာရာတစ္ေယာက္ ဘာေတြဆက္ျဖစ္မလဲဆိုတာ ဒီဇာတ္လမ္းတြဲမွာျမင္ေတြ႕ရမွာျဖစ္လို႔ ၾကည့္႐ူအားေပးၾကပါဦးေနာ္ Review – Hmue File Size – 600MB Format…mp4 Quality : 1080p ...
Maya and the Three Season 1 Complete
The Croods: Family Tree (App only) ##unicode The Croods Family Tree Seriesမှာတော့ Croodsမိသားစုဟာ The Croods 2မှာBetterman မိသားစုနဲ့အတူ Punch Monkeyတွေကို တိုက်ခိုက်ရင်း ယာခင်းကို ပြန်အရယူနိုင်ခဲ့တယ်။Betterman မိသားစုနဲ့ Croodsတွေလဲ ပြေလည်မှုရသွားတာကြောင့် Guyအပါအဝင် Croodsမိသားစုဟာ Bettermanမိသားစုနဲ့အတူ ယာခင်းမှာဘဲ ဆက်နေကြတော့တယ်။ မတူညီမှုများစွာနဲ့ မိသားစုနှစ်စု အတူတူနေထိုင်ရင်း ဘယ်လိုမျိုးအလွဲတွေဖြစ်မလဲ။ မိသားစုနှစ်စုမတူညီတဲ့အရာတွေကို ဘယ်လိုညှိနှိုင်းပြီး အဆင်ပြေအောင်နေထိုင်ကြမလဲ။ Croods မိသားစုနဲ့ Betterman မိသားစုရဲ့ နေ့စဉ်ဘဝအလွဲများစွာကို ဒီ Seriesလေးမှာ ကြည့်ရှုပေးကြပါအုံး။ ##zawgyi The Croods Family Tree Seriesမွာေတာ့ Croodsမိသားစုဟာ The Croods 2မွာBetterman မိသားစုနဲ႔အတူ Punch Monkeyေတြကို တိုက္ခိုက္ရင္း ယာခင္းကို ျပန္အရယူႏိုင္ခဲ့တယ္။Betterman မိသားစုနဲ႔ Croodsေတြလဲ ေျပလည္မႈရသြားတာေၾကာင့္ Guyအပါအဝင္ Croodsမိသားစုဟာ Bettermanမိသားစုနဲ႔အတူ ယာခင္းမွာဘဲ ဆက္ေနၾကေတာ့တယ္။ မတူညီမႈမ်ားစြာနဲ႔ မိသားစုႏွစ္စု အတူတူေနထိုင္ရင္း ဘယ္လိုမ်ိဳးအလြဲေတြျဖစ္မလဲ။ မိသားစုႏွစ္စုမတူညီတဲ့အရာေတြကို ဘယ္လိုညႇိႏႈိင္းၿပီး အဆင္ေျပေအာင္ေနထိုင္ၾကမလဲ။ Croods မိသားစုနဲ႔ Betterman မိသားစုရဲ႕ ...
Trese Season 1 Complete ##unicode ဒီ series ကတော့ ဖိလစ်ပိုင် comic bookကို Netflix ကနေ eng အသံနဲ့ seriesပြန်ရိုက်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ် Shay Mitchell က မင်းသမီးနေရာမှာ အသံသရုပ်ဆောင်ထားပါတယ် ဖိလစ်ပိုင်မနီလာမြို့ကြီးမှာ လူသားတွေနဲ့ supernatural မျိုးနွယ်တွေယှဉ်တွဲနေထိုင်ကြပါတယ် သူတို့ကြားထဲက ငြိမ်းချမ်းရေးက ပျက်သုဉ်းလုနီးပါးဖြစ်နေပါတယ် အဲလက်ဇန်ဒရာတို့မိသားစုက လူသားကမ္ဘာနဲ့ မြေအောက်လောကကြားမှာ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ထိန်းသိမ်းခဲ့ပါတယ် အဲလက်ဇန်ဒရာရဲ့အဖေမရှိတော့တဲ့နောက် ဒီတာဝန်က အဲလက်ဇန်ဒရာရဲ့ပခုံးပေါ်ကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ် မြေအောက်လောကတွေကျူးလွန်တဲ့ပြစ်မှုတွေကို အဲလက် ဘယ်လိုဖော်ထုတ်မလဲ သူ့အဖေလို ငြိမ်းချမ်းရေးထိန်းသိမ်းနိုင်မှာလားဆိုတာ ဒီဇာတ်လမ်းတွဲမှာကြည့်ရူရမှာပါ အပိုင်း၆ပိုင်းပါဝင်ပြီး horror series ကောင်းကောင်းလေးဖြစ်လို့ တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ##zawgyi ဒီ series ကေတာ့ ဖိလစ္ပိုင္ comic bookကို Netflix ကေန eng အသံနဲ႔ seriesျပန္႐ိုက္ထားတာပဲျဖစ္ပါတယ္ Shay Mitchell က မင္းသမီးေနရာမွာ အသံသ႐ုပ္ေဆာင္ထားပါတယ္ ဖိလစ္ပိုင္မနီလာၿမိဳ႕ႀကီးမွာ လူသားေတြနဲ႔ supernatural မ်ိဳးႏြယ္ေတြယွဥ္တြဲေနထိုင္ၾကပါတယ္ သူတို႔ၾကားထဲက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးက ပ်က္သုဥ္းလုနီးပါးျဖစ္ေနပါတယ္ အဲလက္ဇန္ဒရာတို႔မိသားစုက လူသားကမာၻနဲ႔ ေျမေအာက္ေလာကၾကားမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ထိန္းသိမ္းခဲ့ပါတယ္ အဲလက္ဇန္ဒရာရဲ႕အေဖမရွိေတာ့တဲ့ေနာက္ ဒီတာဝန္က အဲလက္ဇန္ဒရာရဲ႕ပခုံးေပၚကိုေရာက္လာခဲ့ပါတယ္ ေျမေအာက္ေလာကေတြက်ဴးလြန္တဲ့ျပစ္မႈေတြကို အဲလက္ ...
Trese Season 1 Complete
Yasuke ##unicode ဒီတစ်ခေါက် ရွေးချယ်ထားတဲ့ကားလေးကတော့ Netflix Channel ကနေ တင်ဆက်ထားတဲ့ "Yasuke" ဆိုတဲ့ Japan Anime ကားလေးပါ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ခွန်အားကြီးတဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ အိုဒါနိုဘူနာဂါရဲ့လက်အောက်မှာ ပထမဆုံးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ လူမည်းဆာမူရိုင်းယာဆူကီကို inspire ယူထားတာပါ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ နိုဘူနာဂါခေါင်းဆောင်ကျဆုံးပြီးတဲ့နောက်မှာ ယာဆူကီဟာတောရွာလေးမှာပဲ မထင်မရှားနေထိုင်နေရင်း အီချီကာနဲ့ဆာကီဆိုတဲ့သားအမိနှစ်ယောက်နဲ့တွေ့ပါတယ် ဆာကီဟာမွေးရာပါနေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့အတွက် ဆေးကုသဖို့လိုနေပါတယ် ဆေးသွားကုဖို့လမ်းခရီးဟာအန္တရာယ်များတဲ့အတွက်ယာဆူကီကိုလိုက်ပို့ဖို့ အီချီကာကိုအကူအညီတောင်းပါတော့တယ် ဒီလိုနဲ့လမ်းခရီးမှာ ထူးဆန်းတဲ့လူတွေတိုက်ခိုက်တာခံရတဲ့အခါ ဆာကီရဲ့အမေ သေဆုံးသွားပါတော့တယ် ယာဆူကီတစ်ယောက်ဆာကီနဲ့နှစ်ယောက်တည်းကျန်ခဲ့ပါတော့တယ် ဒါပေမယ့် ဆာကီရဲ့အမေမပြောပြခဲ့တဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုရှိနေပါတယ် အဲ့တာကတော့ ဆာကီမှာ ထူးခြားတဲ့စွမ်းအင်ရှိနေတာပါ ယာဆူကီတစ်ယောက်ဆာကီ့ကိုဘယ်လိုကာကွယ်သွားမလဲ ဆာကီမှာရှိနေတဲ့စွမ်းအင်တွေကရော ဘယ်လိုမျိုးလျှို့ဝှက်ချက်တွေရှိနေမှာလဲဆိုတာကိုတော့ ဇာတ်လမ်းထဲမှာဆက်လက်ကြည့်ရှုလိုက်ကြပါဦး ##zawgyi ဒီတစ္ေခါက္ ေ႐ြးခ်ယ္ထားတဲ့ကားေလးကေတာ့ Netflix Channel ကေန တင္ဆက္ထားတဲ့ "Yasuke" ဆိုတဲ့ Japan Anime ကားေလးပါ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရဲ႕ခြန္အားႀကီးတဲ့ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ အိုဒါႏိုဘူနာဂါရဲ႕လက္ေအာက္မွာ ပထမဆုံးတာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့တဲ့ လူမည္းဆာမူ႐ိုင္းယာဆူကီကို inspire ယူထားတာပါ ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္းကေတာ့ ႏိုဘူနာဂါေခါင္းေဆာင္က်ဆုံးၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ယာဆူကီဟာေတာ႐ြာေလးမွာပဲ မထင္မရွားေနထိုင္ေနရင္း အီခ်ီကာနဲ႔ဆာကီဆိုတဲ့သားအမိႏွစ္ေယာက္နဲ႔ေတြ႕ပါတယ္ ဆာကီဟာေမြးရာပါေနမေကာင္းျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ေဆးကုသဖို႔လိုေနပါတယ္ ေဆးသြားကုဖို႔လမ္းခရီးဟာအႏၲရာယ္မ်ားတဲ့အတြက္ယာဆူကီကိုလိုက္ပို႔ဖို႔ အီခ်ီကာကိုအကူအညီေတာင္းပါေတာ့တယ္ ဒီလိုနဲ႔လမ္းခရီးမွာ ထူးဆန္းတဲ့လူေတြတိုက္ခိုက္တာခံရတဲ့အခါ ဆာကီရဲ႕အေမ ေသဆုံးသြားပါေတာ့တယ္ ယာဆူကီတစ္ေယာက္ဆာကီနဲ႔ႏွစ္ေယာက္တည္းက်န္ခဲ့ပါေတာ့တယ္ ဒါေပမယ့္ ဆာကီရဲ႕အေမမေျပာျပခဲ့တဲ့လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္တစ္ခုရွိေနပါတယ္ အဲ့တာကေတာ့ ဆာကီမွာ ထူးျခားတဲ့စြမ္းအင္ရွိေနတာပါ ယာဆူကီတစ္ေယာက္ဆာကီ့ကိုဘယ္လိုကာကြယ္သြားမလဲ ဆာကီမွာရွိေနတဲ့စြမ္းအင္ေတြကေရာ ဘယ္လိုမ်ိဳးလွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ေတြရွိေနမွာလဲဆိုတာကိုေတာ့ ဇာတ္လမ္းထဲမွာဆက္လက္ၾကည့္ရႈလိုက္ၾကပါဦး Review – Phyu Sin File Size – ...
Fate: The Winx Saga ##unicode Bloom က ဒီကမ္ဘာကြီးပေါ်ကသာမန်ဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးတစ်ယောက်ပါ။ တစ်နေ့မှာတော့ သူကထူးဆန်းတဲ့မှော်အစွမ်းတစ်ခုကို သူကိုယ်တိုင်တောင်မသိလိုက်ဘဲ အသုံးချမိသွားတယ်။ အဲ့မှာပဲ Alfeaဆိုတဲ့ မှော်ကျောင်းတစ်ခုက ကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီးက သူ့မှော်အစွမ်းတွေကို ထိန်းချုပ်နိုင်အောင်သင်ပေးမယ်ဆိုပြီး လာခေါ်ပါတယ်။ အဲ့ကျောင်းက နတ်တွေတက်တဲ့ကျောင်းဖြစ်ပြီး သာမန်လူ့ကမ္ဘာကနေ သွားချင်တိုင်းသွားလို့မရပါဘူး။ Bloom တစ်ယောက် မိဘတွေကို ဆွစ်ဇလန်မှာကျောင်းသွားတက်မယ်လို့လိမ်ပြီး မှော်ကျောင်းကိုရောက်လာပါတော့တယ်။ မှော်ကျောင်းက ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူတွေက နတ်မိဘတွေကနေ ဆင်းသက်လာကြတာပါ။ Bloom ကတော့ လူသားမိဘ ၂ ပါးကဆင်းသက်လာတာဆိုတော့ အထူးအဆန်းဖြစ်နေတာပေါ့။ အဆောင်မှာ ကိုယ်စီမှော်အစွမ်းတစ်မျိုးစီရှိကြပြီး စရိုက်မျိုးစုံရှိတဲ့ ကောင်မလေး ၄ ယောက်နဲ့ အတူတူနေရင်း Bloom တစ်ယောက် ဘာတွေသင်ယူရမလဲ။ သူ့ဘဝကရော ဘယ်လိုလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်မှုတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေမလဲဆိုတာကို စိတ်ဝင်စားဖွယ်ခံစားကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ##zawgyi Bloom က ဒီကမာၻႀကီးေပၚကသာမန္ဆယ္ေက်ာ္သက္မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ပါ။ တစ္ေန႔မွာေတာ့ သူကထူးဆန္းတဲ့ေမွာ္အစြမ္းတစ္ခုကို သူကိုယ္တိုင္ေတာင္မသိလိုက္ဘဲ အသုံးခ်မိသြားတယ္။ အဲ့မွာပဲ Alfeaဆိုတဲ့ ေမွာ္ေက်ာင္းတစ္ခုက ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီးက သူ႔ေမွာ္အစြမ္းေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေအာင္သင္ေပးမယ္ဆိုၿပီး လာေခၚပါတယ္။ အဲ့ေက်ာင္းက နတ္ေတြတက္တဲ့ေက်ာင္းျဖစ္ၿပီး သာမန္လူ႔ကမာၻကေန သြားခ်င္တိုင္းသြားလို႔မရပါဘူး။ Bloom တစ္ေယာက္ မိဘေတြကို ဆြစ္ဇလန္မွာေက်ာင္းသြားတက္မယ္လို႔လိမ္ၿပီး ေမွာ္ေက်ာင္းကိုေရာက္လာပါေတာ့တယ္။ ေမွာ္ေက်ာင္းက ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြက နတ္မိဘေတြကေန ဆင္းသက္လာၾကတာပါ။ Bloom ကေတာ့ ...
TMDb: 8.6/10 198 votes
Plerng Prang Tian အပိုင်း(၁ မှ ၁၂)အထိ စ/ဆုံး ~အတိတ်ဘဝ~ ကျောက်နွိုင်ထေဝါရစ်အဖြစ် Toey Pongsakorn တီအန်ခမ်း အဖြစ် Nychaa Nuttanicha ကျောက်ဝုန်ဒုန်းအဖြစ် Yoghurt Nattasha လူဝီအဖြစ် Pon Nawasch ~လက်ရှိဘဝ~ အင် အဖြစ် Toey Pongsakorn ကလင်း အဖြစ် Nychaa Nuttanicha ပတီမာ အဖြစ် Yoghurt Nattasha ဘန် အဖြစ် Pon Nawasch ကလင်းဆိုတဲ့အမျိုးသမီးဟာ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အထင်ကရ သရုပ်ဆောင်မင်းသမီးတစ်ယောက်… ချောမောလှပတဲ့ရုပ်ရည်ရှိသလို သရုပ်ဆောင်ပိုင်းဆိုရင်လည်း ဇာတ်ကောင်စရိုက်အပေါ် အာရုံစိုက်လွန်းတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်….ဒီလိုချောမောလှပတဲ့မင်းသမီးဟာ ချစ်မိတော့လည်း အများသူငါသိနေတဲ့ အိမ်ထောင်ရှိ ကျောက်မျက်ရတနာဆိုင်ပိုင်ရှင်တစ်ယောက်… ဒီလူက မိသားစု စီးပွားရေးအခြေအနေအရာ လက်မှတ်မထိုးထားဘဲ ဟန်ဆောင်သဘောမျိုးလက်ထားတယ်လို့ သာဆိုပေမဲ့ ကလင်းအတွက်တော့ မလွယ်ကူပါဘူး..ဟိုလူ့ရှောင်ရ ဒီလူရှောင့်ရနဲ့….မီဒီယာတွေကလည်း အိမ်ထောင်သည်နဲ့ဖောက်ပြန်တယ်ဆိုပြီး စတင်ရေးသားလာကြပါတယ်…. ဒီကြားထဲ အိပ်ပျော်တိုင်း အိပ်မက်ဆိုးတွေမက်တတ်သလို တစ်ခါတစ်ရံ တခြားသူတွေမမြင်တဲ့ ခြောက်ခြားစရာမြင်ကွင်းတွေမြင်လေ့ရှိတတ်ပါတယ်….တစ်နေ့တော့ ရိုက်ကွင်းက စီစဉ်ပေးထားတဲ့ ဆံထိုးလေးကျိုးသွားတော့ ကလင်းဟာ သူမပိုင်ရှေးဟောင်းပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဆံထိုးပဲထိုးမယ်ဆိုပြီး ဒါရိုက်တာကိုပြောလိုက်ပါတယ်… အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ ဆံထိုး ထိုးပြီး သရုပ်ဆောင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲ သူမဟာ ဒီဘဝမှာမဟုတ်ဘဲ ရှေးဘဝ နန်းတွင်းခေတ်ကို ပြန်ရောက်သွားပါတော့တယ်…သူမရောက်သွားတဲ့ နန်းတွင်းက ဘဝမှာတော့ ရန်သူတွေ မနာလိုသူတွေပတ်လည်ဝိုင်းနေတဲ့ ...
Teenage Bounty Hunters Teenage Bounty Hunters (2020) ================================ Bounty Hunters ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ကြားဖူးလား။ Bounty Hunters ဆိုတာက ​​ပြောရရင် လူဆိုးဖမ်းတာမျိုး​​ပေါ့။ လူဆိုးကိုသွားဖမ်းမယ် ဆု​ကြေး​ငွေရမယ်​ပေါ့။ အဲ့လိုသ​ဘောမျိုးပါ။ ဟုတ်ပြီ ဇာတ်ကားနာမည်​လေးနဲ့စလိုက်မယ် Teenage Bounty Hunters။ ဘာလဲ​ပေါ့။ ဆယ်​ကျော်သက်​တွေက လူဆိုး​တွေကိုလိုက်ဖမ်းမှာလား​​ပေါ့။ ပိုစတာမှာကလဲ ​ကောင်မ​လေးနှစ်​ယောက်ပဲပါတယ်။ ဒီနှစ်​ယောက်ကဖမ်းမှာလား​ပေါ့။ ဟုတ်ပါတယ် ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ ဒီကောင်မလေးနှစ်​ယောက်ကပဲဖမ်းကြမှာပါ။ Teenage Bounty Hunters ကို​တော့ 2020 August 14 ရက်​နေ့မှာ Netflix က​နေ ထုတ်လွှင့်ခဲ့ပြီး​တော့ အပိုင်းအ​နေနဲ့ 10 ပိုင်းပါရှိပါတယ်။ တစ်ပိုင်းကို မိနစ် ၅၀ ဝန်းကျင်ကြာမြင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Teenage Bounty Hunters ကို​တော့ Casting Director တစ်​ယောက်ဖြစ်တဲ့ Kathleen Jordan က​နေမှ ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်​​ကောင်နှစ်​ယောက်ဖြစ်တဲ့ Maddie Phillips ...
လေးသည်တော် နှင့် ဖိုးရွှေလိပ် ( 2000 ) Completed ငယ်ငယ်တုန်းက ည၇ နာရီ မြဝတီက ပြတဲ့ အာရားရားဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားလေးလာရင် အပြေးအလွှားကြည့်ရတာအမောပါပဲ အသက်ဝင်နေတဲ့နှစ်တစ်ထောင်လင်ဇီးဆေးမြစ်လေးအာရားရား ပြီးတော့ ငယ်ငယ်ကတည်းက အသည်းစွဲဖြစ်ခဲ့ရတဲ့မင်းသမီးချော လျိုရှမ်းရှမ်းနဲ့ ကျန်းရှန်တို့ရဲ့အချစ်ဇာတ်လမ်း..အကျင့်ယုတ်လှတဲ့နတ်ဆရာကြီးဝူပျန်း စွဲစွဲမြဲမြဲကိုစောင့်ကြည့်ဖူးတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲလေးပါပဲ
လေးသည်တော် နှင့် ဖိုးရွှေလိပ် ( 2000 ) Completed
bollywood series 52
Eng Series 108
Korea series 63